Home » Travel Technology News » Keflavik International Airport dia nandefa ny vahaolana fanaraha-maso ny sisintany kiosk voalohany ao Schengen
Androany, ny fampiharana kioska efatra dia natao tao amin'ny Keflavik International Airport (KEF) any Islandy. Ireo kioska dia ao anatin'ny mpanamory fiaramanidina enim-bolana handraisana ireo fepetra takiana amin'ny Entry / Exit System (EES) an'ny Schengen Area, izay misy fanjakana 26 eropeana izay nanafoana tamin'ny fomba ofisialy ny pasipaoro rehetra sy ny karazana fifehezana sisintany hafa. sisintany. Ity no vahaolana fanaraha-maso ny sisintany kiosk mandeha ho azy voalohany a Mpikambana Schengen fanjakana.
Ny EES dia ampahany amin'ny fonosana Smart Border natolotry ny Vaomiera eropeana. Hiasa tanteraka amin'ny firenena Schengen rehetra amin'ny faran'ny taona 2021. Ny tena tanjon'ny EES dia ny fisoratana anarana ny angon-drakitra momba ny fidirana, ny fivoahana ary ny fandavana ny fidiran'ny teratany firenena fahatelo mamaky ny sisintany ivelany an'ny firenena mpikambana Schengen rehetra amin'ny alàlan'ny foibe iray. system.
KEF no fiampitana sisintany lehibe indrindra ao amin'ny firenena miaraka amin'ny 95 isan-jaton'ny mpandeha miditra amin'ny faritr'i Schengen mamaky an'i Islandy tonga amin'ity seranam-piaramanidina ity. Ireo kioska dia azo alaina hampiasaina ireo firenena telo firenena (TCN) sy olom-pirenena eropeana rehefa miditra any Islandy. Ny kioska dia namboarina mba hahafeno ny fepetra takin'ny polisy Islandy.
"Izahay eto Isavia dia mitady hatrany ny fomba hanatsarana sy hanatsarana ny mandeha ho azy ho an'ny mpandeha," hoy i Gudmundur Dadi Runarsson, talen'ny teknika sy fotodrafitrasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Keflavik. "Amin'ny alàlan'ny fanamoriana fiaramanidina ho an'ity vahaolana vaovao sy manavao ity dia te hanangona vaovao izahay ary hanomana ny tenanay hanamora ny fizotrany ho an'ny rehetra rehefa ampiharina ireo fitsipika vaovao. Ireto kioska vaovao ireto dia hanampy amin'ny fanafainganana ny fizotran'ny mpandeha, hanatsara ny traikefa ananany ary hiantoka fitsangatsanganana mahafinaritra mamakivaky ny seranam-piaramanidina Keflavik ary hanome fampahalalana lehibe ho an'ny fampandrosoana sy ny fampandehanana ny faritry ny sisintany vaovao antenaina hampiasaina amin'ny 2022. "
Tamin'ny volana jolay 2018, ny kioska maharitra maharitra manome fifehezana ny sisin-tany fidirana sy fivoahana any Eropa natomboka tamina kioska miisa 74 biometrika azo atao ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Pafos sy ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Larnaka any Sipra.
Mampiasa kiosko ahafahan'ny zotram-piasa-miasa hampiasain'izy ireo haingana ny fizotran'ny fifehezana sisintany. Ao amin'ny kioska, misafidy ny fiteniny ireo mpandeha, mamaky ny antontan-taratasiny ary mamaly fanontaniana vitsivitsy vitsivitsy. Ny kioska koa dia maka sary ny endrik'ireo mpandeha tsirairay izay azo oharina ary hamarinina manohitra ny sary ao amin'ny pasipaorony elektronika. Avy eo ny mpitsangatsangana dia mitondra ny tapakilan'ny kiosk feno any amin'ny manampahefana misahana ny sisin-tany.
Ireto kiosks ireto dia voaporofo fa mampihena ny ora fiandrasan'ny mpandeha mihoatra ny 60 isan-jato. Tao anatin'ny White Paper navoakan'i InterVISTAS vao nivoaka, ny fanadihadiana dia nanatsoaka hevitra fa ny fampiasana kiôka ho an'ny fifehezana ny sisin-tany dia mihoatra lavitra noho ny fikarakarana ny fifindra-monina nentim-paharazana miaraka amin'ny tompon'andraikitra amin'ny sisintany. Izany dia miteraka fihenam-bidy sy habaka ary ahafahan'ny tompon'andraikitra amin'ny sisintany mifantoka amin'ny fitazonana ny filaminan'ny sisin-tany. Ireto kioska ireto dia manome fikirakirana faningana tsara kokoa, azon'ny olona sembana an-tsakany sy an-davany ary azo fehezina hatramin'ny fiteny 35 isan-karazany. Izy io dia afaka manodina ny mpandeha rehetra, ao anatin'izany ireo fianakaviana mandeha vondrona.